चितवन खबर – Nepaliko Aawaj
रत्ननगर । लायन्स क्लव अफ रत्ननगर मिड नेपालको शुक्रवार पद हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बर्ष सन २०२१/२२ का अध्यक्ष सुर्यप्रकास रेग्मीले २०२२/२३ का अध्यक्ष दिलीप सुवेदीलाई पद हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम आज (रत्ननगरमा) सम्पन्न भएको हो । । वडा नं १० का वडाध्यक्ष कलाधार पौडेल प्रमुख अतिथि रहेको सो कार्यक्रममा मिड नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुरेशचन्द्र आचार्य, लायन्स क्लवका...
चितवन । बकुलहर रत्ननगर अस्पताल, आँखा उपचार केन्द्रमा मधुमेहका बिरामीहरुको लागि निशुल्क आँखा परिक्षण गरिएको छ । लायन्स क्लब अफ चितवन नेशनल पार्क, लायन्स क्लब अफ रत्ननगर पञ्चकन्या, नेपाल नेत्रज्योती संघ र भरतपुर आँखा अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा आज (शुक्रबार) बिहान १० बजेदेखि दिउसो ३ बजे सम्म ३५ जना मधुमेहका बिरामीहरुको निशुल्क आँखा परिक्षण गरिएको लायन्स क्लब अफ रत्ननगर पञ्चक...
चितवन । यहि असार १७ गते (शुक्रबार) बकुलहर रत्ननगर अस्पताल, आँखा उपचार केन्द्रमा मधुमेहका बिरामीहरुको लागि निशुल्क आँखा परिक्षण शिविर हुने भएको छ । लायन्स क्लब अफ चितवन नेशनल पार्क, लायन्स क्लब अफ रत्ननगर पञ्चकन्या, नेपाल नेत्रज्योती संघ र भरतपुर आँखा अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा असार १७ गते (शुक्रबार) बिहान १० बजेदेखि मधुमेहका बिरामीहरुको लागि निशुल्क आँखा परिक्षण शिविर हुने ला...
चितवन । रत्ननगरमा ५ देखि ११ वर्षका करिब ९ हजार बालिकाहरुलाई कोरोना बिरुद्धको फाइजर खोप लगाइएको छ । रत्ननगर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख माधव पौडेलले नेपालीको आवाज डटकमलाई दिएको जानकारी अनुसार रत्ननगरका बिद्यालयमा रहेका ५ देखि ११ बर्ष सम्मका बालबालिकाहरुलाई यहि असार ९ देखि १५ गते सम्म अभियाननै सन्चालन गरि १६ वटै वडामा ४४ ओटा स्कुलमा खोप केन्द्र बनाई कोरोना बिरुद्धको फाइज...
चितवन । पूर्वी चितवनको खैरहनीमा रहेको लदरी खोलाले बगाउदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार आज (मंगलबार) दिउसो ०३.१५ बजेको समयमा खैरहनी नगरपालिका वडा नं. ६ तुल्सीपुर स्थित लदरी खोलामा न्युरो टिप्न जाँने क्रममा खोलाको डिलबाट चिप्लिएर लडेपछि खोलाले बगाउदा रत्ननगर वडा नं. १४ माधबपुर घर भई हाल खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १ साहीचोक बस्ने वर...
रत्ननगर । रत्ननगरमा मुख्य कार्यालय रहेको युनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो १५औं स्थापना दिबसको अबसरमा रत्ननगर अस्पताल सहित चारवटा सामाजिक संस्थालाई सहयोग गरेको छ । रत्न्नगर ११ मा रहेको गामबेशीको चेप्पाङ संरक्षण केन्द्रमा आश्रित चेपाङ वालबालिकाहरुको लागि रु. ३० हजार बराबरको शैक्षिक सामाग्री, रत्ननगर १३ मा रहेको श्रीराम बैद्धिक संस्कृत गुरुकुलममा अध्यनरत बटुकहरुको लागि ...
चितवन । माडीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी छाेराले आफ्नै आमाकाे हत्या गरेका छन् । आज (साेमबार) दिउसाे ०३:१५ बजेको समयमा माडी न.पा ६ स्याउलिवास स्थित आफ्नै घर देखी १०० मिटर पर मकैवारीमा छाेराले आमाकाे धारिलो हतियार प्रहार गरि हत्या गरेकाे प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार स्याउलिवासमा बस्ने बर्ष ५५ की माया देवी तामाङ्लाई उनकै छोरा बर्ष ३७ का अर्जुन तामाङ्ले पछाडीबाट धारिल...
महेश पाण्डे चितवन । रत्ननगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रल्हाद सापकोटाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । शुक्रबार नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित ११औँ नगरसभामा सापकोटाले बिभिन्न १३ वटा निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । सापकोटाले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन बिकास, सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पुर्...
चितवन । चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ,निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार आयोजित एघारौं नगर सभमा मेयर शशीकुमार खनियाले नीति तथा कार्यक्रम र उपमेयर कविता उप्रेतीले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन । सो नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि १ अर्व १ करोड १२ लाख ५१ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । प्रस्तुत बजेटमा आन्तरीक आम्दानी १५ करोड ८ ...
रत्ननगर ०८ असार । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं १ काउलेका चेपाङ समुदायलाई मंगलवार अम्रिसोको विरुवा वितरण गरिएको छ । सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्टले सञ्चालन गरेको सबै यात्राको सुरुवात एक सपनाबाट हुन्छ नामक परियोजनाले १०० जना किसानलाई ५० हजार विरुवा वितरण गरेको हो । काउलेमा आयोजित कार्यक्रममा परियोजनाका कार्यक्रम निर्देशक सुजन बस्नेतले विरुवा हस्तान्तरण गरेका थिए । ...
बुधबार, आषाढ ०८, २०७९